oolleyda iyo feyruska hargabka keena : Poultry : Agriculture : University of Minnesota Extension
Extension > Agriculture > Poultry > Avian influenza > oolleyda iyo feyruska hargabka keena
Qoolleyda iyo feyruska hargabka keena
Qoolley ayaa lagu tijaabiyey feyruska keena cudurka hargabka shimbiraha. Tijaabadaas waxey muujisay iney qoolleydu leedahay ka-hor-tag fiican oo ka difaacaya inuu cudurkani ku dhaco. Qoolleyda waxaa lagu duray feyrus laga soo qaaday digaag iyo shimbiro waaweyn oo u eg goroyada. Qooley da’dooda ay u dhexeyso 8-32 bilood ayaa lagu duray ama sanka lagaga buufiyey feyruska, ka dib 21 maalmood oo baaritaan lagu sameeyay qeybta ka hor tagga cudurada ee jirka Qoolleyda, lagama helin wax dhaqdhaqaaq ah oo tusaya in isbedel ku yimid qeybtaas. Qoolleyda feyruska lagu talaalay ma aysan u gudbinin feyruska digaaga ay la kulmeen oo u jilicsanaa iney cudurka qaadaan. Feyrusk fudud iyo mid halis ahba waa lagu tijaabiyey daraasaddan (Panigraphy et al., 1996). Perkins et al., (2002), taas oo lagu duray ama sanka laga siiyey qoolley 4 toddobaad jirta, iyadoo la isticmaalay feyruska loo yaqaano circovirus (H5N1) Hong Kong. Feyruska lagama ilaalin qoolleydii la duray, wax dhaawac ahna laguma arag qoolleydaas. Tijaabadan intii la sameynayey, baaritaan dhiigga ah lama sameysin. Labada cilmibaare ee la yiraahdo Slemons and Easterday (1972) waxey xaqiijiyeen tijaabo lagu sameeyey shimbirta turkiga ah oo qabta cudurka hargabka khatarta ah iyo qoolley lagu talaalay feyruska A/Tk/Ontario H5N9 AIV, tijaabadan waxey xaqiijisay in qoolleyda jirkoodu uu u soocay feyruska si ka duwan sidii tijaabadii hore. Lama ogaan karo, ayey yiraahdeen, in feyruska uu jirku soocay uu yahay midkii lagu talaalay iyo in uu yahay mid ka dhashay cudurka turkiga. Tijaabo kale oo sanka lagaga buufiyey cudurka hargabka ah ayaa lagu sameeyay qoolley iyo turki jooga wadanka Jarmalka waxaana lagu talaalay cudurka feyruska la yiraahdo (A/turkey/Germany/AR534/13 (H7N7) laba maalmood ka dib markii la talaalay waxaa laga dareemay dheecaan yar oo ka imaanaya. Dheecaanka intiisa badan wuxuu ka imaanayey marinka neefsiga, in kasta oo, A/turkey/Germany/AR534/13 (H7N7), lagu arkay dheecaan soo raacay saxarada. Laakiin wax dhaawac ah laguma arag xubnaha gudaha (Kalthoff et al., 2014). Tijaabada kaliya ee la sameeyey, iyada oo la istimaalayo feyrus laga soo qaaday qoolley uu si dabiici ah cudurku ugu dhacay (H5N1, clade 2.2.1/C, Egypt) ayaa waxaa lagu ogaaday in uu saamey ku yeeshay Qoolleyda habdhiskeeda dareen-wadka iyo in ay dhigeyso saxaro cagaaran. Waxaa la yaab leh in shimbiraha kale oo caadiga ah markuu cudurku si caadi ah ugu dhacay aan laga dareemin wax saameyn ah oo uu ku yeeshay, ka hortaga difaaca jirka shimbiraha waxaa lagu qiyaasay inuu ahaa inta u dhaxeysa 10e1.6-10e3.16 (Shimaa et al., 2014).
Xog ururin lagu sameeyay duurjoogta oo ay ku jiraan 480 iskugu jira qoolley iyo shimbirta dove-ka loo yaqaano, kuwaas oo aan la kala soocin ka dib markuu dilaacay cudurka shimbiraha ee gobolka Pennsylvania, sanadkii 1983, xog ururintaas laguma ogaanin in uu feyrusku uu tarmayo ama uu saameyn ku yeeshay difaaca jirka. Waxaa intaa sii dheer 309 qoolley oo dheeraad ayaa lagu sameeyay baaritaan isla xilliga uu dilaacay cudurka shimbiraha, wax saameyn laguma arag difaaca jirkooda. Baaritaan muddo aad u dhow laga sameeyay magaalada New York suuqeeda Qoolleyda, iyadana wax saameyn ah laguma arag.
Woxogaa feyrus ah oo uu difaaca jirku soocay ayaa lagu arkay sanduuqa wasakhda looga aruuriyo digaagga ee suuqa magaalada Hong Kong. Feyruskaas wuxuu u yara eg yahay mid laga helay digaagga nooca baalasheedu u eg yihiib xariirta, koronkorada, iyo noocyada kale ee digaagga ah oo ku nool magaalada Hong Kong. Wax tijaabo ah oo feyrus lagu talaalay laguma sameyning digaaggan.
Farac ka mid ah feyruska H5 ayaa sababay cudur ka dilaacay shimbiraha ku nool wadanka Masar. Feyruskani wuxuu la mid yahay sida kan laga helo meelaha digaagga iyo boolonboolada ay ku nool yihiin. Intaa waxaa sii dheer in kani uu sababay geermis cudur ku keenay dadka deggan meesha cudurka uu ka dilaacay. Tijaabo ayaa lagu sameeyay laba qoolley oo aad u da’yar oo lagu qiyaasay ilaa iyo 40 maalmood, Qoolleydaas waxaa laga soo bixiyey xeyn qoolley ah oo gaareysa 50 oo iskugu jira da’ walba. Baaritaan lagu sameeyay labadaas qoolley ayaa waxa lagu ogaaday inuu ku dhacay hargabka halista ee Qoolleyda. Xeyntii ay ka mid ahaayeen waxaa laga dareemay dhimaso degdeg ah oo gaareysa boqolkiiba konton (50%), muuqaalka jirka oo beddelmay iyo shuban cagaaran.
Gabagabadii, Qoolleyda waxaa la ogaaday in jirkeedu uu leeyahya difaac adag oo ka celiya hargabka halista ah ee shimbiraha ku dhaca, laakiin waxaa suurto gal ah in feyruskani uu qabatin ku sameeyo jirka Qoolleyda. Jeermiska dabiiciga ah ee la xiriira hargabka shimbiraha saameyntiisu inta badan wey koobneyd. Hasa yeeshee noocyo ka farcamay feyruska H5 ayaa badanaaba ku noo jirka Qoolleyda. Baaritaanka la sameeyay wuxuu muujinayaa markii cudurkani uu ku dhaco Qoolleyda in lagu arkay xubnaha jirka oo bedelma iyo shuban cagaaran.
Daraasadaha lasoo xigtay